अमेरिकाकाे हिन्द-प्रशान्त रणनीति र चीनकाे बीआरआई - Punhill Onlineअमेरिकाकाे हिन्द-प्रशान्त रणनीति र चीनकाे बीआरआई - Punhill Online
३ माघ २०७६, शुक्रबार १७:०३ मा प्रकाशित (5 महिना अघि)
नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज करर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत हो वा होइन भन्ने विवाद चर्किरहेका बेला ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ र बीआरआईको कुरा गरौँ।
८ सेप्टेम्बर २०१३ को दिन । कजाकस्तानको राजधानी अस्टानाको नजरबायभ विश्वविद्यालयमा उभिएर राष्ट्रपति सीले भाषण दिएका थिए । हो, त्यसैमा उनले पहिलो पटक ‘रेशम मार्ग आर्थिक भेग’ (सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट) को अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । कुनै पनि मुलुकले ल्याएको पूर्वाधार निर्माणको अहिले सम्मकै ठुलो प्रयास भनिने यो चिनियाँ रणनीति ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) हुँदै अचेल ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरई) नामले चिनिन्छ। व्यापार गर्न सजिलो बनाउने विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गर्ने अनि त्यो क्रममा र मार्फत चीन त भैहाल्यो तर विश्व नै सम्पन्न तुल्याउने यो रणनीतिको देखिने र चीनले दाबी गरेकाे उद्देश्य हो। नेपाल सहितका थुप्रै मुलुकले चीनीयाँ बीआरआई रणनीतिमा सहर्ष सहमति जनाउँदै सहभागिता जनाईसकेका छन् । तर यो रणनीतिलाई शङ्काले हेर्ने अनि यसमा कुत्सित मनसाय, विशेषगरि सैन्य मनसाय, लुकेको देख्ने मुलुक पनि थुप्रै छन् । यो सूचीमा मुख्यगरी हामीलाई लामो समयदेखि आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य सहयोग गर्ने अमेरिका, हाम्रै अति घनिष्ट छिमेकी भारत र जापान छन् ।
आयोजना बनाऊ भनेर ऋण दिने, तिर्न नसक्नेको घाँटी समाएर हम्बनटोटामा जस्तो जमिनै लिईदिने चिनियाँ व्यहोरा अमेरिका, भारत लगायत थुप्रै मुलुकले मन पराएका छैनन् । सीपेक अन्तर्गत विकास आयोजनाका लागि चीनले दिएको ठूलो ऋण तिर्न पाकिस्तानलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ । त्यसैले ग्वादर पनि चीनले सधैँका लागि ख्वाप्ल्वाक्क पार्ने हो कि भन्ने डर अमेरिकालाई छ। अनि अहिले पो व्यापारिक जहाज आउछन्, तर पछि चीनले युद्दपोत ल्याएर हम्बनटोटा र ग्वादरलाई सैन्यकरण गर्ने हो कि ? यो डरले हाम्रो मित्र भारत त झन् कुर्सीको छेऊमै लड्नै लागेझै बसेको छ।
१० नोभेम्बर २०१७। भियतनामको डा नाङ्गमा आयोजित एसिया प्रशान्त आर्थिक सहकार्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एपेक सीईओ) शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो पटक “स्वतन्त्र र खुला हिन्द-प्रशान्तको लागि हाम्रो दृष्टिकोण” प्रस्तुत गरे। त्यो दृष्टिकोणले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रलाई यस्तो परिकल्पना गर्दछ- “यस्तो ठाउँ जहाँ विविध संस्कृति भएका र थुप्रै फरक सपना बोकेका सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रहरू सँगसँगै समृद्ध हुन र स्वतन्त्रता र शान्तिमा फल्नफुल्न सक्दछन्।” यो क्षेत्र कस्तो हुनु पर्छ भन्नेक्रममै अमेरिकी नेता थप्छन् (भिडियाे)- “राष्ट्रहरूको एउटा सुद्नर नक्षत्र जहाँ सबै आफैमा चम्किला तारा हुनेछन् र कोहि पनि कसैको उपग्रह हुने छैनन्, र प्रत्येक मुलुकको आफ्नै जनता, आफ्नै संस्कृती, आफ्नै जीवनशैली र आफ्नै घर हुने छ ।”
राष्ट्रपति ट्रम्पका शब्दहरू फेरी पढ्नुस् अनि अघिल्लो अनुच्छेद् मा इङ्गित चीनियाँ व्यहोरा कोप्रति लक्षित थियो भनेर । राष्ट्रपति ट्रम्पको त्यो भाषण यता त्यसमा व्यक्त दृष्टिकोण थप निखारिएको छ र त्यसले नाम पाएको छ अमेरिकाको ‘भारत प्रशान्त रणनीति’।
आफ्नो परराष्ट्र नीतिबारे जानकारी दिने अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयकाे वेब साइट सेयरअमेरिकाका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’लाई प्रशान्त महासागरदेखि भारतीय उपमहाद्वीपसम्म फैलिएको क्षेत्रप्रतिकाे “फलामे र दीगाे प्रतिबद्धता” भनेर वर्णन गरेको छ। सेयरअमेरिकामा उल्लेख छ- “याे पहल तीन क्षेत्रहरुमा केन्द्रित छ: अर्थशास्त्र, शासन र सुरक्षा ।”
अब केटाकेटीले पनि बुझ्ने कुरो हो अर्थशास्त्र भन्नाले व्यापार, सहायता लगायत खनखनी गनिने मुद्राजन्य कुरासँग सम्बन्धित भयो। शासन भन्नाले शासन प्रणाली र शैली (लोकतन्त्र, सुशासन, रुबिस् अर्थात् नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली जसमा दोश्रो विश्वयुद्धयता मुख्यत अमेरिकी नेतृत्वमा खुलेका राष्ट्रसंघ, विश्व ब्यांक, मुद्रा कोष लगायतका ब्रेट्टन उड्स संरचना पर्ने भए) पर्लान्। अनि सुरक्षा भन्नाले हलिउडदेखि बलिउडसम्मको क्षेत्रमा सैन्य तालिम र सहकार्य तथा नौसैन्य सुरक्षालगायतका विषय पर्छन् भनेर अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयले नै लेखिसकेपछि मैले थप के भनि रहनु ।
अँ, एमसीसीको त उल्लेखै गरेको छैन मैले अहिलेसम्म। तर त्यो जिम्मा मैले अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री माइक पोम्पेओलाई दिनेभएँ ।
३० जुलाई २०१८ मा वासिङ्टन डीसीमा आयोजित एउटा समारोहमा पोम्पेओले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका व्यापारिक नेताहरू र अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गरे। त्यो भाषणमा पोम्पेओले “ट्रम्प सरकारकाे स्वतन्त्र र खुला हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रकाे प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति प्रस्तुत गर्दै किन अमेरिकी व्यापारिक संलग्नता त्यसकाे केन्द्रमा छ” भन्ने जानकारी दिए । अर्थात्, पोम्पियोको भाषण ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’नामको ओदानका तीन मध्ये एउटा खुट्टो, अर्थशास्त्र, मा केन्द्रित थियो।
त्याे भाषणामा पोम्पेओले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकसँगकाे अमेरिकी व्यापारिक र सहायता (एड) सहकार्यकाे विवरण पेस गरे । त्यसमा उनी प्रष्टै भन्छन्, “सन् २००४ यता हाम्रो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले हिन्द-प्रशान्त राष्ट्रहरूको विकास र सुशासन प्रबर्द्धन गर्न २ अर्ब १० कराेड डलर खर्च गरेको छ ।”
लगत्तैकाे वाक्यमा पोम्पेओ भन्छन् (भिडियोमा ८ मी :५५ से ), “नेपालमा सयौं किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न र त्यस देशको ऊर्जा सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न गर्न एमसीसीले अहिल्यै ५० कराेड (डलर) खर्च गरीरहेको छ ।”
पोम्पेओको भाषणमा नेपालको सन्दर्भ आएपछि मैेले पुर्पुरोमा हात राखेँ । एकजना बरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले झन्डै चार महिना अगाडि प्रष्ट पारिसकेको कुरोलाई लिएर हाम्रोमा कत्राकत्रा महानुभावहरूले कत्राकत्रा राष्ट्रिय मञ्चमा कति घण्टा कति दिनको समय बर्बाद पारे । छापाखानामा खेर गएको मसीको चिन्ता लाग्यो।
प्रष्ट छ, ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ यो क्षेत्रका मुलुकहरूसँग कसरी र कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने दस्तावेज हो । जसरी सी सरकारले थुप्रै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई बीआरआई रणनीति वा नेपालका सन्दर्भमा ‘हिमालपार बहुआयमिक जडान सञ्जाल’ अन्तर्गत राखेको बुझिन्छ, ट्रम्प सरकारले पनि यो भेगका मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत राखेको देखिन्छ ।
पोम्पेओले भनेझैँ हिन्द-प्रशान्त रणनीति अमेरिकाको कुनै एक मन्त्रालय वा कुनै एक क्षेत्रमात्रै समेट्ने रणनीति हैन। यो समग्र अमेरिकी सरकार (मन्त्रालयहरू, निकायहरू आदि) को नीति हो। माथि नै उल्लेख गरेँ, यो रणनीतिमै परेको छ नेपाललाई दशकौँदेखि सहायता दिईरहेको अमेरिकी विकास निकाय युएस एआईडीको कार्य । त्यो मात्र के कुरा, अमेरिककी सरकारले हामीसँग गर्ने सम्पूर्ण व्यवहारलाई नै उनीहरूको यही रणनीति अन्तर्गत हालिएको छ। साँच्चै भन्ने हाे भने अहिले नेपालमा बसेकाे अमेरिकी दूतावास पनि उनीहरूकाे हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै बसेकाे भन्ने मैले बुझेँ ।
अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिले तीन क्षेत्र समेट्दो रहेछ- आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा । अनि एमसीसीको नेपालमा आउने सहयोग मुख्यतः आर्थिक र अलिअलि राजनीतिक रहेछ। राजनीतिक किन भने केहि कानुनी कुराहरू सुधार्नु पर्ने भन्ने छन् क्याहो जो नेपालले गरिसकेको छ। यो सहयोग हिन्द-प्रशान्त रणनीतिकाे सुरक्षा छाता अन्तर्गत पर्ने भए अमेरिकाले भनि हाल्थ्यो, उसले यस्तो कुरा लुकाउँदैन । त्यसैले प्रष्टै छ, एमसीसी सहयोगमा सुरक्षा तत्व छैन।
अमेरिका-नेपाल सुरक्षा सहयाेग र सहकार्य
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले १ जुन २०१९ मा निकालेको ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन‘ पनि पढेँ जसमा नेपालसँग सम्बन्धित सुरक्षा तत्वहरू प्रष्टै किटिएका छन् र तीनमा एमसीसी पर्दैन । यो ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो, ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ ओदानको तेस्रो खुट्टाको नाम ‘सुरक्षा’ हो जसमा सैन्य साझेदारी, सहायता जस्ता अनेकौ कुरा पर्छन्। रणनीतिबारेकाे रक्षा मन्त्रालयकै रिपाेर्टमा नेपालसँग सम्बन्धित सुरक्षा तत्वहरू प्रष्टै किटिएकाे छ भन्ने थाहा पाएपछि तपाईंलाई पनि लाग्दो हो, ओहो, त्यसो भए पक्कै नेपाल यो कुत्सित अमेरिकी रणनीतिको “सदस्य” बन्न हुन्न किनकि हाम्रो नीति भनेको असंग्लग्न पो त । (अनि त्यसाे भनुञ्जेल अमेरिका र भारतले “यसमा सैन्य नीति पनि लुकेको छ है” भन्ने दाबी गरेको चिनियाँ बीआरआई रणनीतिमा सही धस्काएको कुरोलाइ एकछिनलाई बिर्सीदिनुस् । साथै यो “सदस्य” बन्ने नबन्ने अप्ठेराेबारे पुछारमा लेखेको छु)।
मलाई टेबुल मुनि लुक्न जाउँ झैँ लाज लागेको कारण अब खुलाउँछु। आज तपाईं भन्नुहुन्छ, यो अमेरिकी रणनीति सैन्य हो त्यसैले हामी यसको “सदस्य” बन्नु हुन्न । तर तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ (वा हुन सक्छ), नेपालले अमेरिकासँग सैन्य सहकार्य गर्न थालेको बर्षौं भइसक्यो। हामीले दशकौंदेखि राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियान वा शान्ति सेनामा भाग लिइरहेको चाहिँ के हो? यसै बर्ष पनि शान्ति कायम राख्ने अभियान (पिस किपिङ् फोर्स) मा लाग्ने कुल खर्चको झन्डै २८% अमेरिकाले व्यहोरेको छ, आफ्नो कुनै न कुनै रणनीति अन्तर्गत । के ‘कुनै न कुनै’ भन्नु, शान्ति अभियानमा जाने नेपाली सेनालाई अमेरिकाले तालिम दिन्छ नि, यहिँ पाँचखाल आएर, त्यो त उसको हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै रहेछ । ४ नोभेम्बर २०१९ मा अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त’ दस्तावेजका अनुसार नेपालसहितका हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई शान्ति सेनामा जान सहयोग गर्न ट्रम्प सरकारले पाँच करोड ४० लाख डलर खर्चेको छ।
अनि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन’का अनुसार जुन २०१८ मा नेपाली सेना र ‘अमेरिकी सेना प्रशान्त नेतृत्वको जमीन सेना’वीचको वार्ता (र त्यसको स्थापना) पनि उसको हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै भएको रहेछ (पृ. ३६) ।
त्यसको ५ महिनाअघि नेपाल आएका संयुक्त राज्य (नौसेनाको) हिन्द-प्रशान्त कमाण्डका कमाण्डर नौसेनापति फिल डेभिडसनको यात्रा पनि अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै भएको रहेछ । उक्त दस्तावेजमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय भन्छ- “संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँगको हाम्रो रक्षा-सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ। त्यस्तो सम्बन्ध जो मानवीय सहायता तथा प्रकोप राहत, शान्ति सेना सञ्चालन, रक्षाको व्यवसायीकरण, भू–सैन्यबल क्षमता, र आतंकवाद विरोधी प्रयासमा केन्द्रित हुन्छ ।” दस्ताबेज अनुसार अमेरिकी सैन्य बल नेशनल गार्डले पनि सोही रणनीति अन्तर्गतै श्रीलंका र नेपालसँग यसै बर्ष मात्र सम्बन्ध स्थापना गरेको रहेछ।
तर हामी के गर्ने?
हेर्नुस् साथी, जमाना खराब छ। यो राम राज्य हैन। सदियौँदेखि राज्यहरू एकअर्का विरुद्ध लड्दै आएका छन्, कहिले एक्ला एक्लै त कहिले गठबन्धन बनाएर । खुलेआम लडाईँ नभएको अवस्थामा पनि उनीहरूवीच सम्बन्ध चिसो भइरहन्छ। पछिल्लो समय एउटा अदृश्य र चिसो युद्ध बर्लिनको पर्खाल ढलेसँगै सकियो। तर चीनको आश्चर्यजनक उदयसँगै अर्को एउटा टसमस सुरूभएको छ जो जारी अमेरिका-चीन व्यापार युद्दमार्फत छचल्किरहेको छ। झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ, चीनको बीआरआई रणनीतिलाई चुनौती दिन अमेरिकाले हलिउडदेखि बलिउडसम्मको हिन्द-प्रशान्त रणनीति ल्याएको हो। अमेरिका र केही मुलुक बीआरआई रणनीतिमा सैन्य उद्देश्य लुकेको छ भन्छन्। अनि चीनलगायत अमेरिकाका आलोचकहरू हिन्द-प्रशान्त रणनीति चीन घेर्ने हतियार हो भन्छन् ।
तर हामी के गर्ने? टाढाको तर गहिरो मित्र अमेरिका अनि नजिकको मित्र भारतले “नजाऊ है, नगर है” भन्दा भन्दै पनि हामीले बेइजिङ् गएर चीनको बीआरआई रणनीतिमा हस्ताक्षर ठोक्यौँ र आफू एउटा स्वतन्त्र अनि कतै नढल्किने मुलुक भएको प्रमाणित पनि गर्यौँ । अर्थात् हामी परेको बेला अरूलाई सुन्दैनौँ, हाम्रै राष्ट्रहीतलाई केन्द्रमा राख्छौँ। त्यसैले अहिले हाम्रा सामू प्रश्न उभिएको छ, अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीति प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण के हो? वा भनौं, हाम्रो अमेरिकासँगकै सम्बन्धप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण के हो? किनकी ती दुबै एकै हुन् ।
दिनेश वाग्लेको व्लगबाट